JIGJIGA: Masuuliyiintii Jibriga Oo Xabsiga Loo Taxaabay Iyo Waxa Laga Ogyahay Ganacsato Ay Wada-shaqaysan Jireen - Jigjiga Online
HomeSomalidaJIGJIGA: Masuuliyiintii Jibriga Oo Xabsiga Loo Taxaabay Iyo Waxa Laga Ogyahay Ganacsato Ay Wada-shaqaysan Jireen
Jigjiga (JigjigaOnline) – Maamulihii guud ee Jibriga magaalada Jigjiga ayaa xabsiga loo taxaabay iyo xubin kale oo ka tirsan shaqaalaha, kuwaas oo lagu eedeeyey inay sameeyeen falal musuq iyo lid sharci ah.
Maxkamadda guud ee dalka ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in xabsiga loo taxaabay Axmed Maxamed oo ahaa maamulihii guud ee Jibriga Jigjiga iyo Cabdiwaaxid Cabdillaahi.
Labadan masuul ayaa lagu eedeeyey inay la shaqaysan jireen ganacsato Dawladda Deegaanka Soomaalida ah, kuwaas oo ay u samayn jireen cashuur dhimis iyo saayiraad la xidhiidha lacagihii ay waajibka ahayd inay bixiyaan.
Axmed Maxamed iyo Cabdiwaaxid oo isla maanta shaqada laga caydhiyey ka hor intii aan xabsiga loo taxaabin ayaa waxa kale oo lagu eedeeyey in ganacsatada ay saayiraadda u sameeyeen ay ka qaadan jireen lacago jeebadda loogu shubi jiray.
Warku muu caddaynin kuwa ay yihiin ganacsatada la shaqaysan jirtay labadan masuul ee cashuurta laga deyn jiray, hase yeeshee waxa la sugayaa inta ay bilaabmayso maxkamadaynta labadan masuul, markaas oo dacwadda laga ogaan doono magacyada ganacsatada.
Si kastaba ha ahaatee, arrintan ayaa noqonaysa markii ugu horreysay ee intii isbeddelku ka dhacay deegaanka la qabto masuuliyiin lala xidhiidhiyey inay cashuur dhimis u sameeyeen ganacsato, iyagoo jeebadda loogu shubayo lacago laaluush ah.